Waaheen Media Group » Wasiirka Duulista oo doonaya shantii Milyan ee madaarka inuu shaxaado iyo shirkadihii Qandaraaska qaadan lahaa oo diiday
Browse:Home Waaheen News Wasiirka Duulista oo doonaya shantii Milyan ee madaarka inuu shaxaado iyo shirkadihii Qandaraaska qaadan lahaa oo diiday
Wasiirka Duulista oo doonaya shantii Milyan ee madaarka inuu shaxaado iyo shirkadihii Qandaraaska qaadan lahaa oo diiday
Published by Waaheen Media on January 5, 2014 | 0 Comment
Hargeysa(Waaheen) Wasaaradda Duulista hawada Somaliland ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ku baahisay in ay qanadaraas ku bixin doonto lacag shan milyan ah oo ay dawladda Kuwait ugu deeqday si hal kiiloolmitir iyo badh loogu daro Run-wayga madaarka oo ay hore u dhistay, iyo sidoo kale sidii dayr loogu wareejin lahaa madaarka.
Sida ay Waaheen ku heshay xaqiiqooyin u dhuun daloola qandaraaska la doonayey in la bandhigo shanta Milyan ee Doolar waxa soo food saaray caqabad kadib markii sida la sheegay shirkadda China Horn Group in ay diiday qorshe cusub oo uu wasiirku doonayo in uu ku bixiyo, taasoo ay shirkaddu sheegtay in aanay isku bixinayn, isla markaana ku gacan saydhay qiimaha uu u dhigay.
Warku waxa uu intaas ku darayaa qandaraaskan oo lagu bixinayey Xafiiska guddida Qandaraasyada Qaranka oo ay balantu ahayd shalay in la furro in ka soo baxday in la waayey shirkad soo xaraysata, marka laga reebo shirkadda Amal oo imikaba maamusha qaybo ka mid ah jidka Hargeysa iyo Berbera, taasoo aan lahayn qalabka ay haysato shirkadda China Horn Group oo kale.
Sida xoguhu sheegayaan guddida qandaraasyada iyo wasaaradda Duulistu waxay ay hakiyeen Qandaraaskaas ay doonayeen in ay bilaabaan kadib markii ay ka shaaceen qaabka ay shirkadduhu uga cagajiideen mashruucan oo wajigiisii hore qalab la’aan darteed qaatay muddo sanad iyo badh ah, isla markaana Eedo badan Xukuumadda loogu soo jeediyey.
Illaa hada ma jiro hadal ka soo baxay dhinacyada Wasaaradda iyo Guddida Qandaraasyada midkood na hase yeeshee sida ilo wareedyadu xusayaan sababta ugu way nee uu u istaagay waxa lala xidhiidhinayaa in ay tahay wasiirka wasaaradda Duulista Maxamuud Xaashi Cabdi oo doonaya in lacagta uu kala farsameeyo, isla markaana uu qandaraaska ku bixiyo xisaab ka yar ta ay ku hirgali karto hawsha la doonayo in madaarka laga qabto.
Furista qandaraaska waxa si wadajir ah uga qayb qaadanayey Wasiirka wasaaradda Duulista, Guddoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka iyo khubaro ka socota Dalka Kuwait oo masuul ka ah lacagta Somaliland lagu caawiyey isla markaana qayb ka ah kharashka madaarka la galinayo sida ku cad war-saxaafadeedkii ay doraad wasaaraddu ka soo saartay Tobankii Milyan ee hore.